archana: दशैको चहल पहल
Posted by archana at 10/14/2007
Good notion. We have to consider for this. Anyway, Happy Vijaya Dashami 2064...
चित्त बुझ्ने कुरा गर्नुभयो! मान्छेको बानी पनि गज्जबको छ, मासु हसुर्ने आफूले अनि दोष दिने देउतालाई! कुनैपनि मन्दिरमा बली दिन नपाउने गरी प्रतिबन्धनै लगाउनु पर्छ।
तपाईँलाई र तपाईँको ब्लगका पाठकहरुलाई दशैंको धेरै-धेरै शुभकामना!